၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် စစ်အစိုးရကျင်းပမည့်ရွေးကောက်ပွဲကို မွန်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးသပိတ်မှောက်မည် | Ethnic Nationalities' Voice: Struggling Voices for Justice
၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် စစ်အစိုးရကျင်းပမည့်ရွေးကောက်ပွဲကို မွန်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးသပိတ်မှောက်မည်
တဖက်သတ်ရေးစွဲထားသော ဖွဲ.စည်းပုံအခြခံဥပဒေကို လွတ်လပ်မှုနှင့် တရားမျှတမှုမရှိသော လူထုဆန္ဒခံယူပွဲနဲ.အတည်ပြုလိမ်လည်ပြီးနောက် ကိုယ့်လှေကိုယ့်လှော်နေမည့် (၂၀၁၀) ခုနှစ် တွင်စစ်အစိုးရတရားဝင်ဖြစ်ရေးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန်ပြင်ဆင်နေပါသည်။
စစ်အစိုးရကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲကို မွန်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး အနေနဲ.ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်းကို ဒုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ နိုင်ငွေသိန်း ကပြောကြားလိုက်ပါသည်။ “ကျနော်တို.ဝင်ပြိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း၊အခြေခံဥပဒေဟာ စစ်အစိုးရအာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ရေးဆွဲထားသည့်အတွက်ကြောင့် ပြည်သူထုအတွက်လည်း အကျိုးရှိမှာ မဟုတ်၊ထို.ကြောင့်၊ မွန်လူထုအနေနဲ.လည်း မပါဝင်သင့်ကြောင်း ” သူကပြောပါသည်။
ထို.အပြင်၊မွန်ပြည်သစ်ပါတီကလည်း၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ.ပတ်သက်ပြီး ဘာမှပြင်ဆင်ထားတာမရှိကြောင်း၊ မကြာခင်ကမီဒီယာသတင်းဌာနအားပြောကြားလိုက်သည်။ သို.သော်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်နိုင်ဦးဆောင်သောခွဲထွက်အဖွဲ.ကတော့၊ ဝင်ပြိုင်မည့် သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါသည်။
ကေအိုင်အို၊ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကတော့ ရွေးကောက်ပွဲနဲ. ပတ်သက်၍ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဖြစ်သူ ဒေါက်တာလဂျာ က“ကျနော်တို့ အနေနဲ့ကလက်နက်ကိုင် ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ဖြစ်နေတော့ နိုင်ငံရေးပါတီ ထူထောင်ဖို့ အပြောင်းအလဲ မရှိသေးဘူး၊ ဒါပေမယ့် ကချင်လူထု သဘောထားအတိုင်း ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတာရှိပါတယ်၊ သူတို့ပြင်ဆင်မူကိုတော့ ကျနော်တို့ထောက်ခံပါတယ်၊ ဒီ ကချင်လူထုကို ကိုယ်စား ပြု ပြီးဖြစ်လာမယ့်ပါတီကတော့ ပေါ်ထွက်လာခြင်း မရှိသေးပါဘူး” ဟုပြောသည်။
Thu 10 Jul 2008, IMNA
The Mon National Democratic Front (MNDF) will not formanew party and will not contest the 2010 general election because the party did not accept the approved constitution, said MNDF Vice Chairman.
The MNDF had decided not to contest the elections which will be stage managed by the Burmese military junta.
“We will not contest. Even Mon people should not because the constitution was drafted for the army to retain power in the country and it will not benefit people,” Nai Ngwe Thein told IMNA.
“We believe if we continue to struggle, one day we will get real democracy,” he added.
MNDF was founded in 1988 and it won five seats in the 1990 election. But the party was abolished by the Burmese military junta in 1992 with other ethnic pro-democracy parties.
MNDF was illegally moved with other ethnic pro-democracy parties and the National League for Democracy which fared well in the 1990 elections.
The military government runs the New Light of Myanmar recently reported that the result was no longer valid and NLD should contest the 2010 election.
“The 1990 election result is legal because after the election no one decided when parliament would expire,” Nai Ngwe Thein said.
He also asked the Mon community to avoid getting involved in the election. But the New Mon State Party splinter group led by former party’s army chief Maj.Gen Aung Naing stated that his group will contest the election and asked people for support.
However the main armed political party has not decided whether they would join the elections. Although the NMSP sent representatives to the national convention which was drafting the constitution and later just sent observers, the junta ignored its inputs along with 13 ethnic other cease-fire groups.
နာဂစ်မုန်တိုင်းဘေးသင့်ဒေသများတွင် အမျိုးသမီးများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့်အကာအကွယ်ရရှိရေးကို အာမခံရမည် ဟု ယူအန်အက်ဖ်ပီအေ ပြော
ကိုယ်က အသာစီးရနေပြီလို.ထင်ပြီး နွားကျောင်းသားစကားပြောနေသည့် ပညာမဲ့လူတန်းစားအုပ်ချုပ်သောခေတ်ကြီး၊